गोकुल बास्कोटाले तत्काल राजिनामा दिउन्, नदिए कार्यकक्षबाटै प'क्राउ गरियोस्– रवि लामिछाने - Sidha News
गोकुल बास्कोटाले तत्काल राजिनामा दिउन्, नदिए कार्यकक्षबाटै प’क्राउ गरियोस्– रवि लामिछाने
काठमाडौँ। चर्चित टेलिभिजन प्रस्तोता रवि लामिछानेले सूचना तथा सञ्चारमन्त्री गोकुल प्रसाद बास्कोटा माथि तत्काल छानबिन गर्न माग गरेका छन्।
बास्कोटा घुस बार्गेनिङ: “ओलीज्यू! यही हो ‘भ्रष्टाचार गर्दिनँ, भ्रष्टाचार गर्न पनि दिन्नँ’ भनेको?”
काठमाडौँ – सूचना तथा सञ्चारमन्त्री गोकुल प्रसाद बास्कोटाले ‘घुस बार्गेनिङ’ गरेको खुलासा भएसँगै अहिले नेपाली राजनीतिमा ठूलै हलचल मच्चिएको छ।
‘म आफू भ्रष्टाचार गर्दिनँ र अरुलाई पनि गर्न दिन्नँ ।’ भन्ने केपी शर्मा ओली क्याबिनेटकै सदस्यले घुसमा बार्गेनिङ गरेको अडियोनै सार्वजनिक भएपछि अनेक प्रश्न उब्जिएका छन्।
बास्कोटा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका विश्वासपात्रको रुपमा चिनिन्छन्। उनले सेक्युरिटी प्रिन्टीङ प्रेसको खरिदमा ७० करोड कमिसनका लागि कमिसनमा बार्गेनिङ गरेको खुलासा हुनुले भ्रष्टाचार विरुद्ध ओलीले दिने गरेको अभिव्यक्ति माथि समेत प्रश्न उब्जिन थालेको छ।
यसै बीच समाजवादी पार्टी नेपालका अध्यक्ष बाबुराम भट्टराईले पनि यस प्रकरणलाई लिएर कडा प्रश्न गरेका छन्। भट्टराईले सामाजिक संजाल मार्फत टिप्पणी गर्दै प्रम ओली माथि यही हो “भ्रष्टाचार गर्दिनँ र भ्रष्टाचार गर्न पनि दिन्नँ” भनेको? भन्दै प्रश्न तेर्स्याएका छन्।
ट्वीटरमा ओलीलाई मेन्सन गर्दै भट्टराईले अरूको आंगको जुम्रा खोज्नु भन्दा पहिले आफ्नै आंगको भैसी हेर्न प्रधानमन्त्री ओलीलाई सुझाएका छन्।
“अरूको आंगको जुम्रा खोज्नु भन्दा पहिले आफ्नै आंगको भैसी हेर्ने हो कि प्रम केपी शर्मा ओलीज्यू! यही हो “भ्रष्टाचार गर्दिनँ र भ्रष्टाचार गर्न पनि दिन्नँ” भनेको?”,भट्टराईको प्रश्न छ।